Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu.
Adeemsa armaan gadii fayyadamuun galmee dhangii kan birootiin olkaa'ame banuu ni dandeessa:
Faayilii - Bani cuqaasi.
Dhangii tarree Faayiloota gosa keessaa fili.
Maqaa faayilii filiitii Bani cuqaasi.
Galmeewwan ukaankaa hunda jijjiiruu
Masaka, kan karaa dalagaa galmeewwan hunda Maykirosoft Woordii,ekseelii Maykirosoft yookiin Maykirosoft paawor poo'eentii irraa garakeessa galmeewwan dhangii faayilii GalmeeBanaatti garagalchuu fi jijjiiru si qajeelchu, bani. Galeeloo maddaa fi galtee filachuu, galmeewwan fi/yookiin qajoojilee jijjiiruufi jijjiiruu dhiisuu, fi kan caalaa dabalataan ifteessuu ni dandeessa.
Faayilii - Masakoota - Jijjiiraa Galmee fili.
Faayiloota HTML Barreessaa keessaa banuu
Barreessaa/SaphaphuuLibreOffice keessaa banuuf gosa faayilii "Galmee HTML"fili.Kuni galmeewwan HTML LibreOffice keessaaf durtii dha.
Dirqaleen hundi Barreessaa/Saphaphuu LibreOffice amma siif jiru, kanneen akka Madda HTML agarsiisi.
Barreessaa LibreOffice keessatti banuuf "Galmee HTML (LibreOffice Writer)" fili.
Dirqaleen hundi Barreessaa LibreOffice amma siif jiru. Dirqaleen hundi Barreessaan LibreOffice gulaallii galmeewwaniif kennu dhangii HTML tiin olkaa'amuu hin danda'an.
Lakkadda VBA tiin hojjechuu
Dhangii faayilii durtii qindeesuu
Title is: Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu.